Nhau - Vangani vaunoziva nezve gumi gumi zvakavezwa zvivezwa pasi rese?
Vangani vaunoziva nezve gumi zvakavezwa zvivezwa pasi rese?
Vangani vaunoziva nezve zvivezwa gumi zvine mukurumbira pasi rese?
Ndeapi emifananidzo gumi iyi yaunoziva iwe munyika?Mumatanho matatu, zvivezwa (zvivezwa) zvine nhoroondo refu uye tsika uye hupfumi hwekuchengetedza. Marble, ndarira, huni uye zvimwe zvinhu zvakavezwa, zvakavezwa, uye zvakavezwa kuti vagadzire mifananidzo inooneka uye inooneka yehunyanzvi neimwe nzvimbo, inoratidza hupenyu hwemagariro uye kuratidza manzwiro ehunyanzvi evatambi, Kuratidzira kwehunyanzvi kwezvakanaka pfungwa.Iko kuvandudzwa kwevekumadokero huvezi hunyanzvi wakasangana nematatu matatu, achiratidza izere mufananidzo weunyanzvi sekuzviziva kwedu. Yakasvika pakakwirira kwayo kwekutanga muGreek yekare neRoma. Iyo yepamusoro nhamba yaive Phidias, nepo kuItaly Renaissance ikave yechipiri yepamusoro. Michelangelo pasina kupokana aive akakwirira nhamba yenguva ino. Muzana ramakore rechi19, France yaive nekuda kweKubudirira kwaRodin uye ikapinda chechitatu chepamusoro.
Mushure meRodin, chivezwa chekuMadokero chakapinda munguva nyowani-iyo nguva yezvivezwa zvazvino. Zvivezwa maartist vanoedza kubvisa zvisungo zvechinyakare zvivezwa, vanotora mafomu matsva ekutaura, uye vateedzere pfungwa nyowani.
Mazuva ano, tinogona kuratidza hunyanzvi zvisikwa uye budiriro yenguva yega yega kuburikidza nepanoramic nhoroondo yehunyanzvi hwekuveza, uye izvi zvivezwa gumi zvinofanirwa kuzivikanwa.
Kubhururuka kweNefertiti ane makore mazana matatu nemazana matatu ane makore akapendwa pendi yakagadzirwa nematombo epurasita. Icho chifananidzo chakanyorwa ndiNefertiti, Great Royal Wife wekare weEgipita pharaoh Akhenaten. Zvinowanzotendwa kuti chifananidzo ichi chakavezwa nemuvezi Thutmose muna 1345 BC.
Bust yeNefertiti yave imwe yemifananidzo inonyanyo kukosheswa yeIjipita yekare ine yakanyanya kugadzirwa. Ndiyo nyeredzi inoratidzira yeBerlin Museum uye inoonekwa sechiratidzo chenyika yose chekushongedza. Chiumbwa chaNefertiti chinotsanangurwa seimwe yemabasa epamusoro ehunyanzvi mune hunyanzvi hwekare, hwakaenzana nemask yaTutankhamun.
“Ichi chifananidzo chinoratidza mukadzi ane mutsipa murefu, tsiye dzakagadzirwa kunge uta, tsiva dzakakwirira, mhino refu yakatetepa, uye miromo mitsvuku ine kunyemwerera kune simba. Inoita Nefertiti basa rekare rehunyanzvi. Mumwe wevakadzi vakanaka kwazvo. ”
Iripo mumuseum nyowani paMuseum Museum muBerlin.
Mwarikadzi weKukunda muSamotrace
Mwarikadzi wekukunda muSamothrace, chiumbwa chemabhuru, chakareba 328 cm. Iri ibasa rekutanga rechivezwa chakakurumbira chakapona munguva yechiGiriki yekare. Inoonekwa sepfuma isingawanzo uye munyori haakwanise kuongororwa.
Iye mubatanidzwa wemifananidzo yakaoma uye yakapfava inoitwa yekurangarira kukundwa kwaDemetrius, mukundi weSamothrace muhondo yekare yechiGreek, vachipesana nezvikepe zvaMambo Ptolemy weEjipitori. Munenge muna 190 BC, kuitira kuti vagamuchire madzimambo nemauto aikunda, chifananidzo ichi chakamiswa pamberi petembere paSamothrace. Takatarisana nemhepo yegungwa, mwarikadzi akatambanudza mapapiro ake akanaka, sekunge aive oda kukumbira magamba akauya kumahombekombe. Musoro nemaoko echifananidzo chakatemwa, asi muviri wake wakanaka unokwanisa kuziviswa kuburikidza nehembe dzakatetepa uye zvakapetwa, zvichiratidza simba. Icho chifananidzo chose chine mweya unotyisa, uyo unoratidza zvizere dingindira rawo uye unosiya mufananidzo usingakanganwike.
Iyo iripo Louvre muParis ndeimwe yeatatu hupfumi hweLouvre.
Aphrodite weMilos, inozivikanwawo seVenus ine Broken Arm. Inozivikanwa semufananidzo wakanaka kwazvo pakati pezvifananidzo zvevakadzi vechiGreek kusvika parizvino. Aphrodite ndiye mwarikadzi werudo uye runako mungano dzekare dzechiGiriki, uye mumwe wevamwari gumi nevaviri veOlympus. Aphrodite haasi iye chete mwarikadzi wepabonde, iye zvakare mwarikadzi werudo uye runako munyika.
Aphrodite ane chimiro chakakwana uye chitarisiko chevakadzi vekare vechiGreek, vanomiririra rudo uye runako rwevakadzi, uye chinoonekwa sechiratidzo chepamusoro chevakadzi runako. Iko kusanganiswa kwekunaka uye runako. Maitiro ake ese uye mutauro akakosha kuchengeta uye kushandisa A modhi, asi haigone kumiririra kuchena kwechikadzi.
Izvo zvakarasika maoko aVenus nemaBroken Arms pakutanga airatidzika kunge ave chakavanzika chidzidzo chinonyanya kufarira maartist nevanyori vezvakaitika kare. Icho chivezwa parizvino chiripo kuLouvre muParis, imwe yeatatu hupfumi.
Chiumbwa chebhuronzi chaDonatello "David" (c. 1440) ibasa rekutanga kumutsiridza tsika dzekare dzezvifananidzo zvisina kupfeka.
Mumufananidzo, uyu wemubhaibheri hausisiri chiratidzo chepfungwa, asi hupenyu, hwenyama neropa. Iko kushandiswa kwemifananidzo isina kupfeka kuratidza mifananidzo yechitendero uye kusimbisa kunaka kwenyama kunoratidza kuti iri basa rine kukosha kwakakosha.
Pakatonga Mambo Herodhi weIsrael muzana ramakore regumi BC, vaFiristia vakapinda. Paive nemurwi ainzi Goriyati, aive akareba mamita masere uye akashongedzwa nehurefu hukuru. VaIsraeri vakashinga kusarwa kwemazuva makumi mana. Rimwe zuva, mudiki David akaenda kunoshanyira mukoma wake aishandira muchiuto. Akanzwa kuti Goriyati aive nesimba uye akakuvadza kuzviremekedza. Akasimbirira kuti Mambo Herodhi abvume kunyadziswa kwake kuenda kunouraya vaIsraeri muGoriyati. Herodhi haana kukwanisa kuzvikumbira. Mushure mekunge David abuda, akaomba ndokurova Goriyati mumusoro nemuchina wechipfuramabwe. Hofori yakakatyamara yakawira pasi, uye David akavhomora munondo wake zvakanyanya ndokugura musoro waGoriyati. David anoratidzwa semukomana akanaka mufudzi muchifananidzo, akapfeka ngowani yemufudzi, akabata bakatwa muruoko rwake rwerudyi, achitsika musoro wakachekwa waGoriyati pasi petsoka dzake. Mutauriro pachiso chake wakasununguka uye unoratidzika kunge unodada zvishoma.
Donatello (Donatello 1386-1466) aive chizvarwa chekutanga chevanyori veKutanga Renaissance muItari uye muvezi akatanhamara wezana ramakore rechi15. Icho chifananidzo chave ikozvino muBargello Gallery muFlorence, Italy.
Chiumbwa cha "David" chakagadzirwa mukutanga kwezana ramakore rechi16. Chiumbwa chacho chakareba 3.96 metres. Iri basa rekumiririra raMichelangelo, tenzi weRenaissance zvivezwa. Inotorwa seimwe yeakanyanya kudada echirume zvidhori munhoroondo yeWestern art. Mufananidzo waMichelangelo wemusoro waDavid wakacheukira zvishoma kuruboshwe kurwa kusati kwatanga, maziso ake akatarisa kumuvengi, ruoko rwake rweruboshwe rwakabata chipfuramabwe papfudzi, ruoko rwake rwerudyi rwakadonha zvakasikwa, zvibhakera zvake zvakakombama, chimiro chake chakadzikama, zvichiratidza kudzikama kwaDavid , ushingi uye kugutsikana kwekukunda. Iripo muFlorence Academy yeFine Arts.
Chiumbwa cheRusununguko (Chiumbwa cheRusununguko), chinozivikanwawo seRusununguko Kujekesa Nyika (Rusununguko Kujekesa Nyika), ndicho chipo chegumi chegumi chipo cheFrance kuUnited States muna 1876. Chiumbwa cheRusununguko chakapedzwa nemuvezi wekuFrance ane mukurumbira Bartholdi mumakore gumi. Rusununguko rwaMukadzi rwakapfeka zvipfeko zvekare zvechiGreek, uye korona yaanopfeka inomiririra minomwe minomwe yemakondinendi manomwe nemakungwa mana epasi.
Mwarikadzi akabata tochi inoratidzira rusununguko muruoko rwake rwerudyi, uye ruoko rwake rweruboshwe rwakabata “Chiziviso cheRusununguko” chakanyorwa musi waChikunguru 4, 1776, uye pasi petsoka dzake pakadamburwa mahandcuffs, matambo necheni. Anomiririra rusununguko uye obva asununguka kubva kumatambudziko ehudzvanyiriri. Yakapedzwa uye kuvhurwa muna Gumiguru 28, 1886. Chimiro chemukati chechiumbwa chesimbi chakavezwa chakagadzirwa naGustave Eiffel, uyo akazovaka Eiffel Tower muParis. Chiumbwa cheRusununguko chakareba makumi mana nematanhatu, chine hwaro hwemamita makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe uye hurema mazana maviri nemakumi maviri nemashanu. Muna 1984, Statue yeRusununguko yakanyorwa senyika yenyika tsika.
"Mufungi" anoumba murume ane simba anoshanda. Iyo hofori yakanga yakakotama, mabvi akakotama, ruoko rwake rwerudyi rwakazorora chirebvu chake, chinyararire achiona nhamo yakaitika pazasi. Kutarisa kwake kwakadzika uye chiratidzo chekuruma chibhakera nemiromo yake kwakaratidza chimiro chinorwadza zvakanyanya. Mufananidzo wacho hauna kupfeka, uine chiuno chakakotama zvishoma. Ruoko rweruboshwe runoiswa zvakasikwa pabvi rekuruboshwe, gumbo rerudyi rinotsigira ruoko rwerudyi, uye ruoko rwerudyi rwunobviswa pachiumbwa chakapinza-chakarembera. Chibhakera chakakandirwa chakatsimbirirwa pamiromo. Inokodzera kwazvo. Panguva ino, mhasuru dzake dziri kuputika nekutya, dzichiratidza mitsara izere. Kunyangwe iwo mufananidzo wechifananidzo uchiripo, zvinoita sekunge ari kuratidza kuti ari kuita basa repamusoro-soro nekutaura kwakadzama.
"Iyo Funga" muenzaniso munaAuguste Rodin's yakazara system yemabasa. Icho zvakare chiratidzo uye kuratidzira kwake kwemashiripiti ehunyanzvi maitiro. Icho zvakare chiratidzo chekuvaka kwake uye kusanganisa kwehunhu hwekufunga-Rodin's hunyanzvi hwekufunga system Testimony.
Jeff Koons (Jeff Koons) inozivikanwa muAmerican pop muimbi. Muna 2013, imbwa yake yebharuni (orenji) yakaitwa nesimbi isina kuchena yakavharwa, uye Christie akakwanisa kumisikidza mutengo werekodhi we $ 58.4 mamirioni. Koons akagadzirawo dzimwe shanduro mubhuruu, magenta, tsvuku uye yero.
Basa rakakurumbira "Spider" naLuis Bourgeois rakareba kupfuura makumi matatu tsoka. Izvo zvinonakidza ndezvekuti hombe dandemutande yakaverengerwa naamai vemuenzi, uyo aigadzira kapeti. Zvino, zvivezwa zvegandanga zvatinoona, zvinoita kunge zvisina kusimba, makumbo marefu, neushingi anochengetedza mazai emabhuru makumi maviri nematanhatu, sekunge achadonha pasi nekukasira, asiwo akabudirira kumutsa kutya kweruzhinji, madandemutande ndiwo maitiro avo akadzokororwa Misoro yacho inosanganisira dandemutande 1996. Ichi chivezwa chiri muGuggenheim Museum muBilbao. Luis Bourgeois akamboti: Mukuru munhu wacho, akangwara.
Ndiani akasika iyo Terracotta Warriors uye Mahosi eQin Shihuang? Inofungidzirwa kuti hapana mhinduro, asi pesvedzero yayo kuzvizvarwa zvinotevera zvehunyanzvi ichiripo nanhasi uye yave fashoni.